Covid Organics “Mila mailo amin`ny fiarovana azy”
“Voalohany, raha misy firenena manafatra ny tambavy Covid Organics na firenena asiatika io na afrikanina na tandrefa dia midika fa hankatoa ny firenena Malagasy izy ireo. Misy, araka izany, ny laza politika.
Ianao tsy nampoizina hitondra fanefitra eto izao tontolo izao Faharoa, ny « enjeu économique ». Tsy maintsy hanana hambo-po ireo firenena matanjaka amin` ny hoe firenena mahantra no nahita ny fanafody nfanefitry ny aretina COVID-19. Farany, ny “enjeu scientifique”. Ireo Malagasy kely no nahita ity fanafody ity. Midika izany fa hanan-danja ny manam-pahaizana Malagasy. Ny fahavoazana eto amintsika anefa hatramin` izay dia tsy ny fanomezan-danja ireo manam-pahaizana Malagasy. Marihana fa na ny vaksiny anglisy sy alemaina aza mbola tsy nandalo andrana “Clinique” ary mbola ela izany!” hoy Radanoara Julien, mpahay ny fifandraisana iraisam-pirenena, raha naneho ny heviny mahakasika ny toe-draharaha eto amin` ny firenena. Mila fahamailoana kosa isika amin`ny fiarovana amin`izany vokatra izany mba tsy hisy hanao hosoka. “Tsy maintsy mametraka ny valim-pikarohana any amin` ny OMAPI (Office Malgache de la Propriété Intellectuelle). Toy izany ihany koa ny eo anivon` ny iraisam-pirenena toy ny OMPI (office mondiale de la propriété intellectuelle) » hoy izy. Notsipihany koa fa tokony hamafisina rahateo ny fanaraha-maso amin`ny fitsinjarana ny tambavy CVO mba tsy hanimba ny vokatra tsara izay nentina ireo mpikaroka Malagasy.